Isazi Semalt Sichaza Indlela Yokuvimbela Izikhangiso ezingadingeki Kuzo zonke izinhlelo zokusebenza
Izandiso zokuvimbela i-Adblock Plus zidume kakhulu phakathi kwe-webmasters nama-bloggers, ngabe zisetshenziselwa ukubulala izikhangiso ezicasulayo neziphazamisayo noma ukunciphisa ijubane ledivayisi yakho yekhompyutha. Esinye sezibuthakathaka ezibalulekile ukuthi izandiso zisebenza neziphequluli kuphela uma ungazibuyekezi izinyanga noma ungazifaki emithonjeni esemthethweni. Uma ufuna ukuvimbela ukukhangisa kusuka kwezinye izizinda emhlabeni jikelele, ungakwazi kalula ukuhlela amafayela womsingatha wekhompyutha bese umisa isiphequluli, i-iPhone yakho noma olunye uhlelo lokusebenza ukuvula izikhangiso zaleyo nkampani ethile.
U-Igor Gamanenko, uchwepheshe ohola phambili Semalt , uchaza lapha ukuthi yonke inqubo isebenza kanjani.
I-DNS ithathwa njengencwadi yocingo kwi-intanethi - free mysql 5 hosting. Ikhompyutha yakho noma i-laptop izosebenzisa izindlela ezimbili ezahlukene ukuthola indawo phezu kwenethiwekhi. Ekuqaleni, amafayili asetshenzisiwe asetshenzisiwe kepha manje amafayela abe nzima nakakhulu ngenxa ye-University kanye ne-DARPA. Kamuva, i-DNA yasungulwa ngenhloso yokuvula ukufakwa kwamasevisi kubo bonke abasebenzisi. Lezi zinsuku, cishe wonke amasistimu asebenzayo enza i-lookups yegama-kuya-IP ngokuhlola amafayela womsingathi. Uma ifayela lingatholakali, bathumela imibuzo ye-DNA.
Ngesikhathi, i-DNA isiyinkinga enkulu yokuphepha kwi-intanethi. Noma yiluphi uhlobo lomshini onamandla okushintsha igama lokwehlisa igama-kuya-IP lizokhohlisa uhlelo lwakho lwe-DNS ukuze lukholelwe amaseva akude ne-SSL ngaphandle kokukwazisa noma yini. Ukuphepha kwesitifiketi se-SSL kuqinisekisa ukuthi ulwazi lwakho lokuthenga nge-intanethi ku-DNA luphephile futhi luphephile. Uma ushintshe isikhangiso sakho kumshini wendawo, ungakwazi ukwenza kalula imisebenzi ehlukahlukene kudivayisi yakho, ngaphandle kwenkinga. Ingabe yilokho ngempela ofuna ukukwenza? Ezinye izinzuzo zalesi simiso zixoxwe ngezansi.
1. Kungasheshisa i-intanethi ngoba okuzenzakalelayo ihlola ifayela lesikhamuzi sendawo ngaphambi kokusebenzisa i-DNA..
2. Kuwusizo kuzo zonke izinhlobo zeziphequluli futhi zingasebenza ngezinhlelo zokusebenza ezijwayelekile zenkambiso ezifana ne-RealPlayer, i-iTunes, i-Twitter, nabanye.
3. Ingasebenza kumazinga okuxazululwa kwegama le-OS futhi ayihambisani nethrafikhi ye-TCP ne-UDP.
4. Ixhomeke esiteji, MS Windows, OSX, ne-Linux. Uma uhlelo lusebentisa i-IP (i-protocol ye-intanethi), nakanjani itawube nefayela lesitfombe kwenye indawo.
5. Ingayeka ukulandelela isikhangiso, futhi ifayela lomphathi liwumthombo omuhle kakhulu walokho. Uma ungafuni ukulandelwa, kungase kudingeke usebenzise amakhukhi wokuphuma.
6. Kungaba lula ukuvimba i-malware ne-spyware. Uma indawo yeseva ingeziwe efayeleni, lokho kuzothuthukisa ukuphepha kwekhompyutheni yakho futhi kuzoqinisekisa ukuthi kunesipiliyoni esihle kakhulu senethiwekhi.
Vimbela ifayela le-Host nge Amafayela Okudalwa Komphakathi:
Okokuqala, kufanele uthole ifayela lesikhamuzi elikhona endaweni ethile kukhompyutha yakho. Umsebenzi olandelayo ukuvimbela leli fayela ngamafayela adalwe umphakathi. Uma ungenayo ifayela lesikhamuzi, ungaqhubeka ngaphandle kokuguqula. Kodwa uma unefayela lokusingatha, kufanele wenze amanye amakhophi wokusekelayo ukuze uqiniseke ukuthi idatha yakho ayilahlekile. Asikho isidingo sokwakha amafayela we-host, ungeze amaseva amaningi wesikhangiso njengoba ikhompyutha yakho izoqhubeka isebenza ngokuphumelelayo.
Uma uvimbele noma yiliphi iwebhusayithi ngokufaka efayeleni lakho lemphathi, kufana nebhomu lenuzi. Kodwa akukho okumele ukhathazeke ngakho njengoba ungakuvimbela kwi-PC yakho bese uyimisa ekulayisheni.